Trano famoahana tsara indrindra ho an'ny varotra - TopFillers
Home / Famonoana machinery / Honey Filling Machine
Rehefa mandavaka tavoahangy ianao, dia misy karazana fantsona maro ahafahanao misafidy.
Ny NPACK dia manamboatra sy manamboatra milina fanofanana sy fitaovana fanenana ho an'ny Honey.
Ny famokarana menaka fanafody famonosana dia natao hamolavola ny filàna ilain'ny orinasa honko. Izahay dia manamboara ny fitaovana tsara indrindra hiatrehana ny filànao tantanin'ny tantely ary hamenoana ny tanjon'ny vokatrao.
Alefaso aminay anio [mailaka voaaro] Mba hahafantarana misimisy kokoa momba ny milina fanasam-pofomamy izahay na manontany an-tserasera amin'izao fotoana izao, dia ho faly kokoa izahay hanampy anareo. Ny rafitra famatsian-drano dia natao hamolavola ny fangatahan'ny indostrian'ny tantely sy ny indostria hafa.
Ny fangon-tànana feno ranomandry dia mitaky milina mavesatra izay afaka mihazona ranon-tsakafon'izany gidro matevina izany. Ny NPACK dia manana mari-pamokarana famonosana tantely, kapaoka, labiera, conveyors, ary fanadiovana tavoahangy mba hanomezana izay ilain'ireo fampiharana ireo. Ny fitaovana ampiasaintsika dia ahafahana manamboatra fanaka tsy manam-paharoa manokana ary mitazona haavon'ny fahamarinam-pamaritana sy haingana mandritra ny fizotran'ny famonoana. Amin'ny alàlan'ny rafitry ny milina napetraka ao amin'ny toerana misy anao, dia handray soa ianao amin'ny fahombiazan'ny fahaiza-manao sy ny vokatra.
Fametrahana ny rafitra momba ny famenoana masirasira
Noho ny habetsaky ny viscosity avo lenta, ny tantely dia mitaky ny fampiasana tsindry / fatotra izay afaka mameno ny fitoeran-tsakafo. Ny fitaovana famokarana tantely tantely dia afaka mameno tavoahangy sy tavoahangy mifanaraka tsara sy marina ary marina. Ny famenoana ny fametrahana ny masinina dia azo ampiasaina arakaraka ny fepetra takian'ny toerana sy ny fampiharana, miaraka amin'ny modely misy latabatra misy. Azonao atao koa ny mampifamatotra azy ireo amin'ny sehatr'asa hafa entina amin'ny entana vita amin'ny ranom-panafody. Ny fampivoarana tsotra dia mampandeha mora kokoa ny fametrahana haingana manokana ary hamenoana tarehimarika.
Serivisy mahomby, kapila, ary fametahana famantarana
Rehefa vita ny fizotry ny famonoana ranom-bary, dia afaka mahafeno ny filahatry ny fonosana farany ny cappers sy ny labiera. Ny milina fanenitra dia afaka mifampizara karazam-bozaka miavaka amin'ny tavoahangy sy siny amin'ny haben'ny habeny sy ny endriny, ary ireo labiera dia afaka mampihatra ireo mari-pamantarana vokatra nentim-paharazana mitondra ny anarana, sary, ary fanazavana momba ny sakafo. Mba hiantohana ny fahombiazan'ny tontolon'ny fikarakarana, ny rafitra mpanodina dia afaka mitondra tavoahangy miaraka amin'ny hafainganam-pandehany amin'ny famenoana ny endriky ny fonosana farany.
Alohan'ny hamenoana, ny rafitra fanadiovana vita amin'ny tavoahangy dia afaka mahazo antoka fa ny tavoahangy sy ny karazana tantely hafa dia tsy misy vovoka sy ireo hafa mety ho voan'ny aretina. Ny fanadiovana vita amin'ny sifotra dia mampiasa fomba fiasa ionized amin'ny fantsom-pahaizana manokana eo amin'ny tenany sy ny vaksiny ho an'ny fako madio. Ny siramamy rehetra dia alefa any anaty kitapo fanangonana.
Amin'ny fametrahana fomba amam-panao manokana ny fitaovam-pako amin'ny ranomandry avy ao amin'ny NPACK, ny tanjon'ny famokarana dia afaka manome anao vokatra mitombina.
Ampitomboy ny vokatra azo avy amin'ny fitaovana fanafody tantely
Miaraka amin'ny toeram-pamokarana ranon-tantely tsara indrindra sy ny fitaovam-panorenana hafa ao amin'ny famokarana famokarana, dia hahita ny fahasamihafana eo amin'ny famokarana eo amin'ny toerana misy anao. Ny fitaovam-panasan-tsakafo avy any NPACK dia afaka manome anao ny valiny tianao raha vantany vao mametraka azy ao amin'ny toerana misy anao. Tsy mila miahiahy momba ny mety hisian'ny fihemorana sy ny faharetana amin'ny iray na maromaro amin'ny tranontsika napetraka.
Hazo fanondronana lasitra vita amin'ny haingam-pako
Automatique capping machine, Famonoana machinery, Honey Filling Machine
Product Description Automatik Glass Honey Filling Machine Features: Specifications Glass Jar Honey Filling Filling Machine 1. Nampiasaina ho an'ny ranomainty 2. Ny PLC sy ny fanaraha-maso ny ordinatera 3.304 tsy vita amin'ny ordinatera NPACK dia namolavola ny famokarana masom-boly automatique NPACK ary namboarina avy amin'ny SHANGHAI NPACK AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD., Indrindra ho an'ny ranon-dipoavatra matevina matevina, toy ny rano, menaka, loto, , Jam, saosy, tantely, ketchup ary ny sisa. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny indostria entona simika, sakafo sy pharmaceutique. Misy tombontsoa marobe amin'ny milina, ny kitay dia mandeha amin'ny alàlan'ny CNC milina miaraka amin'ny import ...
Famonoana machinery, Honey Filling Machine
Tantely Specifications ny manakombona ireny noho ny tantely Machine 1.Used mameno capping 2.easy mba hanadiovana 3.amount ny famenoana, Adjustable 4.CE, ISO9001 Mameno Machine Machine Body Hopper (amin'ny fanafanana rafitra) Mameno Loha (Araka ny famenoana hafainganam-pandeha takiana) Conveyor Belt Air Control System Box Capping Machine Cap Famahanana System Vacuum System Capping lohany Conveyor Belt Process Flow Fa tanteraka mameno-dalana, a.Feeding tavoahangy tamin'ny Conveyor Belt, mba ho diovina ny tavoahangy milina fanasan-damba sy hiteraka b.Dry voalohany, avy eo amin'ny alalan'ny famenoana Machine feno C .Vakuum Manafina ny cap, avy eo ny famaritana sy ny fampidirana ny Code d.Put mihena ny sarimihetsika eo ambonin'ny cap, dia mihena ny fametahana f.Collecting ...
Pneumatic Control Double Heads Mamy Ranona
Feon-kira 1, 2 ho an'ny famenoana haingana, famenotana haingam-pandeha sy 3 manara-penitra, mora ampiasaina sy hihazona ny 4, ampiasaina amin'ny ronono, solika, fofona etc. Fampiharana Azo alaina ho fanafody, vokatra andavanandro, sakafo ary indostria manokana. ho an'ny famenoana ny fluid. Karazana: Ity milina ity dia manendry ny fanaraha-maso pneumatika ary manana fari-pahaizana malalaka, fampiharana maodely tsotra, endrika tsara sy fanadiovana mety, mety ho an'ny vondrona fipoahana. Fomba fiasa miasa amin'ny semi-automatique famenoan-diloilo famonoana mpanao pistôla. Voatendrin'ny cylinder sy ny piston avy amin'ny fitaovana miaraka amin'ny valim-bolo FIVE mifehy ny fitohanan'ny fitaovana, ary ny magnetic reed switch ny control cylinder dia azo fehezina ny fameno ny volan'ny Rational drafitra ny ...
Ny fampiasana mari-pamantaran-tsakafo ambony mofomamy azo atao tsara ny famenoana haingana ny haingam-pandeha sy ny fepetra azo ampiasaina amin'ny fehezan-teny 316L azo ampiasaina ho an'ny sakafo, fanafody isan'andro, agrochemika, fanafody sy ireo zavatra simika hafa. Izy io dia fitaovana tsara indrindra ho an'ny ranon-drongony sy ny famenoana fako. Miasa Fitsipika Ny milina miasa eo amin'ny telo-dalana fitsipika mba hanitsy ny famenoana ny varingarina habetsahana izay mitarika ny piston sy Rolling miditra tsimoramora hantsaka ka Output ny avo-sakan'ny tsiranoka, ary avy eo ny andriamby jiro mifehy ny dia ny piston. Manana rafitra tsotra sy azo ekena ny milina, mahafeno ny fepetra feno. Fehezanteny ampiasaina amin'ny fifehezana ny pneumatic ...
Semi-automatique semi-automatique tetsy ankapobeny
Fampidirana ny famokarana masira fofona misy semi-automatique: Ity karazana fantsom-bokatra ity dia fizarana vaovao izay mamolavola ny orinasantsika manokana araka ny teknolojia vahiny. Mampiasa piston-karazana metering fitsipika, natambatra herinaratra amin'ny pneumatic miasa miaraka, dia manao maro tombontsoa, ​​toy ny hoe mandefitra famolavolana, voalamina tsara rafitra, tsy miovaova sy azo antoka fampisehoana, marina fandrefesana, maivana sy flexiblity, tsara adaptablity, satria mora ampiasaina sy ny sisa . Ity karazana fantsona ity dia ahitana karazany roa: Ny lohan-doha sy ny dite-dite (ny vokatra tsy voamarina amin'ny lohan-tseroka dia mety voafetra.). Mba hahafahana mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa samihafa, ny karazana tsirairay dia azo atao ihany koa ...
Ireo toetra tena manan-danja Ity milina ity dia manamboatra ny famoahana ny pistôn, mety amin'ny gidro tsy misy gripa, mibontsina mipoitra ary avo lenta. Ny rafitra fametrahana piston amin'ity milina ity dia mety hahatratra ny tanjon'ny fanangonana tavoahangy, ny famokarana famokarana, ny tavoahangy sns automatique automatique. Izy io dia mifanaraka amin'ny fitaovana maotina avo lenta toy ny jam, kitapo kitay, menaka motera, menaka misy menaka sns. Fitsipika teknika NO. Items Performance 01 Mameno loha 8 10 12 16 02 mameno 50ml-1000ml isan-karazany (azo namboarina) 03 Diameter ny tavoahangy vava ≥Ø18mm (azo namboarina) 04 Production fahafahana 2400bottles / ora (haka 500ml foamy vokatra toy ny fizahan-toetra) 05 ...
6 Heads Mamy Masirasira
Fehezanteny 6 Heads Honey Filling Machine Introduction Ity milina ity dia mety amin'ny famenoana ny shampoo, savony. Izy io dia manamboatra rafitra servo, miaraka amin'ny haingam-pamokarana avo lenta ary mameno ny mari-pahaizana. Ny mpihazakazaka dia afaka manitsy ny volan'ny fameno eo amin'ny efitranom-pamokarana mivantana, mora atao ary mamonjy fotoana. Ny fantsom-pamokarana dia natao manokana ho an'ny fitsaboana. Ny sanda ara-teknika Sasin-tsarimihetsika 250ml-5L Speed ​​3000bottles / ora (250ml) Error range ≤ ± 1% Lasa standard Single radio noise ≤50dB Power 220 / 380V 50 / 60Hz 2.0-3.5Kw Pressure air pressure 0.6 ~ 0.8Mpa Control speed Frequency conversion Dimension L3500 * W850 * H1800 Weight 1000Kg Quick Details Karazana: Famenoana ny fepetra momba ny fiasa: Fampiharana vaovao: Karazana fikarakarana karazana: Tavoahangy Fangonam-bidy: Hazo automatique automatique: automatique driven ...
Ny lasitra amin'ny milina fanasambe nataon'ilay orinasa dia mifanaraka amin'ny fangatahana faratampon'ny fangatahan'ny mpanjifa. NPACK-5 (5-60ml) NPACK-10 (10-120ml) NPACK-25 (25-250ml) NPACK-50 (50-500ml) ) NPACK-100 (ml-100-1000) Feature A. Nanaiky ny rivotra nasiam-panitsiana avokoa ny rehetra, noho izany izy ireo dia mety tsara amin'ny fampiasana amin'ny fangatahana tontolo iainana manohitra ny fipoahana, manana fiarovana ambony. B. Tsy misy ny tranganà herin'aratra, ny fahatapahan'ny herinaratra ary tsy ilaina ny mampifandray ny taridin-tany C. Ireo rehetra dia manaiky ny fanaraha-maso pneumatic ankoatra ny fametrahana fitaovana elektronika, noho izany izy ireo dia manana ...
Semi-Automatik automatique piston glas jòn tondrahana machine
Ny fanatanterahana ny milina fanontam-pirinty semi-automatique dia natao hamenoana venty isan-karazany amin'ny vokatra azo avy amin'ny ranon-tsavony sy semi-likid. Ireo fampirimana dia azo ampiasaina betsaka amin'ny sakafo, ny simika, ny pharmaceutique ary ny faritra hafa. Quality assurance 1. Ny milina mpanamboatra NPACK dia fehezin'ny rivotra manempotra, noho izany dia mety amin'ny faritra tsy misy fipoahana na ny vovoka. 2. Izy ireo dia avy amin'ny taratra pneumatic Airtac avy any Alemana. 3. Ny singa rehetra mifandray amin'ny vokatra vokatra dia natao tamin'ny 316 L stainless steel imported, ary novokarin'ny milina CNC. Product Details Name Semi-automatic Piston Filling Machine, Tipping Machine Type General QuaQuality Management System ISO9001: 2008 On-site Management ...
Semi-automatique Hazo fangatahana famonoana fiara ambony
1. Ny famenoana volavolan-dalàna dia alaina amin'ny fampisehoana sy ny lozisia, izay manome fahafaham-po ny fanitsiana ary ahafahan'ny mpandraharaha mamaky ny volan'ny famenoana amin'ny fotoana mahamety izany. 2. Fomba fanondranana roa ho anao mba hisafidianana - 'Manual' sy 'Auto'. 3. Ny ampahany manan-danja rehetra dia natao amin'ny fanaraha-maso ny toerana, izay ahafahanao manangona ny ampahany araka ny tokony ho izy. 4. Tsy dia fahita firy ny tsy fahombiazan'ny fitaovana. 5. Ny milina masira dia fehezin'ny rivotra manempotra, noho izany izy ireo dia mety amin'ny fipoahana na fipoahana entona mando. 6. Ny singa rehetra mifandray amin'ny vokatra dia afaka mifandray haingana, izay manasa haingana kokoa. Options ...
Vita tanteraka ny tavoahangy feno ranomandry ao anaty tavoahangy
Ny NP-VF dia mpanafika matanjaka be afaka mameno ny ranon-tsakany marina sy haingana sy maimbo be ary io dia fitaovana tena tsara amin'ny famenoana tantely. Ny hopitaly tantely dia jaketa miaraka amin'ny rafitra mifangaro sy ny fanamainana. Ny famolavolan-koditra vita amin'ny ranon-tsavoka NPACK automatique dia novolavolaina tamin'ny ravin-tsolika 304 tsy misy rindrina ary afaka manohana ny 2 amin'ny 12 hameno ny fantson-drano PLC Controls, ny mombamomba ny tapakila, ny tapakila mifampizara sakafo, ny stereo tsy misy ala ary ny fanorenana aluminium ny fanorenana, ary maro kokoa ny endri-javatra tonga. Manampy amin'ny fahombiazan'ny vokatra famokarana ampiasaina amin'ny endriky ny kosmetika, ny sakafo, ny solika, ny pharmaceutical, ary manokana ny IT.
Fandefasana milina fanodina milina fanodina milina 50ml mankany 1L
Fitaovana mahaleotena mahazatra sy famenoana milina fiara